LinkTiger: Chọta Njikọ Njikọ Na-apụ apụ na saịtị Gị | Martech Zone
Sọnde, Septemba 8, 2013 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Weebụ na-agagharị ma na-agbanwe mgbe niile. Saịtị na-emechi emechi, rere ya, kwaga, ma kwalite oge niile. Otu saịtị dị ka Martech chịkọtara njikọ njikọ 40,000 na saịtị anyị karịa ndụ ya niile… mana ọtụtụ n'ime njikọ ndị ahụ anaghị arụ ọrụ ọzọ. Nke ahụ bụ nsogbu maka ihe ole na ole:
Ngwaọrụ dị ka ihe oyiyi ndị a na-ahụkwaghị nwere ike belata nbudata nke ibe. Oge a na-erugharị na-emetụta ọnụego mgbanwe, ntụgharị na njikarịcha njin ọchụchọ.
Njikọ ịpụ apụ nke na-adịkwaghị adị na-akụda onye ọbịa ahụ, ya mere ha agaghị enwe ike ịga na saịtị gị ma ọ bụrụ na ejikọghị njikọ ndị ahụ ma baa uru.
Ekekọrịtaghị saịtị ndị pere mpe, ma anaghị ede aha ha; n'ihi, impacting gị n'ozuzu ikike na ike maka ọdịnaya gị iji kwalite ma kesaa.
Maka afọ gara aga ma ọ bụ karịa, anyị ejirila LinkTiger na-egwu saịtị anyị ma nye anyị akụkọ kwa ụbọchị na njikọta nsogbu dị na saịtị anyị:
Ọ bụghị ihe kachasị mkpa maka anyị idozi njikọ ndị a, mana ọ bụ mgbalị na-aga n'ihu. Kwa ụbọchị, anyị na-enweta akụkọ ahụ ma dezie ihe ole na ole site na njikọ ndị na-apụ apụ. N'ime oge, anyị ejirila ọtụtụ puku njikọ agbajiri agbazi ọtụtụ narị posts. Anyị enweghị ike ikpebi ma ọ na-enwe mmetụta kpọmkwem na njikarịcha njin ọchụchọ anyị, mana ka oge na-aga, anyị gara n'ihu na-ahụ mmụba na mbọ anyị niile ka ọ bụghị ihe anyị ga-akwụsị ime.
Ọzọkwa, ọ bụ naanị ihe mara mma ị ga-emere ndị ọbịa anyị!
Cheta na: Anyị bụ ndị mmekọ ugbu a nke LinkTiger.
Tags: 404njikọnjikọahụghịoutbound njikọ